China S216 Pamusoro & Pazasi Labeler Kugadzira uye Fekitori |S-conning
Yepamusoro & Pazasi Yepamusoro Yekumhanyisa Labeling Machine ndeye yakasarudzika yakagadzirwa otomatiki kunyora kunze kwemabhokisi
S216 Pamusoro & Pazasi High Speed ​​​​Labeling Machine
S216 ndeye yakasarudzika yakagadzirwa otomatiki kunyora kunze kwemabhokisi kumusoro & pasi mumhando yemazuva ese zvekuzora, zvemagetsi, zvemishonga, zvekudya uye zvimwe zvigadzirwa zvemaindasitiri.
Yakakura siyana inogadziriswa Bhodhoro Labeling Machine sutu yezvakasiyana saizi chinhu.Iyo yakasarudzika pneumatic inobata label mechanism, simbisa iyo yepamusoro & yepasi pakona kunyora chaiko.
iyo labeler inodzorwa neyepamberi yekumhanyisa kutaurirana interface (HMI) kuve nechokwadi chekuti kuendesa data kwakadzikama uye kwakaringana.Iyo inobvumira iyo dhizaini yekudzora kuti ive yakatwasuka kumberi uye yakatsiga, iyo inovimbisa iyo muchina unoenderera kuburitsa nemazvo.
* inonzwisisika uye inochinjika dhizaini yakanakira akasiyana zvigadzirwa kunyora.
* Inogona kubhururuka nendege yechinhu chakasiyana, kuwedzera application renji.
*Nekuwedzera mamwe mazita evanyoreri vanogona kuona kuti tsvimbo yakanyorwa zvakapetwa kaviri uye kudzokorora kunyora danda, Tinogona kuwedzera zvikamu zvakasiyana zvekuonekwa pamhepo uye kuramba basa zvinoenderana nezvaunoda.
*Dynamic clamping belt .ve nechokwadi chekuiswa kwemazita nemazvo.
*Maitirwo ekunyora anodzorwa neSiemens micro process controller PLC, kuve nechokwadi chekukurumidza uye kwakadzikama kuita.
*Label dispensing inofambiswa neindasitiri giredhi servo mota (Yaskawa/Schneider/Honeywell) kuti ive nechokwadi chekunyora nemanyorero, kushanda nesimba, uye kumhanya uku ichidzikira pakushandisa simba.(Nekuda kwekumhanya kwakanyanya, iyo servo mota inogona kusarudzwa)
* Inoshandisa yakakwirira-yekupedzisira branded fiber optics uye infrared sensors (Keyence / Leon / Dalsa / Kurwara / Leuze) kunyatsoona uye chiratidzo chinokonzeresa pasina kukanganisa.
* Yakazara servo injini dynamic system inopa yakanyanya kugadzikana uye iko kurongeka.
*Inoshanda kune ese marudzi ebhokisi kana mabhodhoro ane dhayamita 30-150mm.
*Kutorwa kwechikamu chepamusoro-soro kubva kuGerman, France, Japan, USA brands.
*Sensitive dhizaini uye chimiro chesainzi.
*S-conning yakasarudzika patent dhizaini, yakasarudzika muindasitiri yekurongedza.
*Yakadzika mushure mekutengesa sevhisi.
* Ita shuwa GMP yezvakatipoteredza zvinodiwa.
* Nyanzvi yeHMI yekubata sikirini: yakawedzera munhu yekubata yekubata chidzitiro.
Iyo S216 Yepamusoro & Yepazasi Otomatiki Labeler yakashongedzerwa nekukwanisa kugadzirisa hunyanzvi hweakasiyana basa rekugadzira, senge nzvimbo dzekunyora uye maparamendi zvinodiwa pakugadzirwa.Izvi zvinovimbisa kuburitsa kwako kwakatsiga uye yakanyanya kunaka kutaridzika kwemavara.
Zvakapfuura: Carton / Bhokisi Pamusoro uye Pazasi Surface Labeling Machine
Zvinotevera: Kaviri Side Flat Square Round Bottle Labeling Machine
Printer For Cosmetics Jars Bottles, Label Applicator Machine Yemabhokisi, Syringe Assembly uye Labeling System, Sticker Labeling Machine Manufacture, Plastiki Chisimbiso Machine, Commercial Bottle Labeling Machine,